Amarka howlgalka Amisom ee Hiiraan iyo Galgaduud oo la bixiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Amarka howlgalka Amisom ee Hiiraan iyo Galgaduud oo la bixiyey
A warsame 10 March 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Taliska ciidamada AMISOM ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay u socdaan howlgallada ka dhanka Alshabaab ee ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya ka bilaabeen qaar ka mid ah gobollada.
Afayeenka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM Col. Cali Aadan Xumad oo la hadlayay waraabahinta ayaa sheegay in howlagaladda ka dhanka Alshabaab ay bilowdeen, islamarkaana la bixiyey amarka howlgalka qeynta 4-aad oo ah Hiiraan iyo Galgaduud.
“Howlgalka qeybta afaraad ee Hiiraan iyo Galgaduud ayaa bilaabanaya, amarkaas waa la bixiyey, madaxda Muqdisho joogta ayaa siiyay qolo kasta amarka iyo farsamada looga baahan yahay”ayuu yiri Col. Cali Aadan Xumad oo la hadlay VOA.
Col. Xumad ayaa sheegay in AMISOM ay la dagaalameyso cid kasta oo hor istaagta, waxaana uu tilmaamay in Al-Shabaab awoodooda ay daciiftay, isagoo xusay in qeybta ugu weyn ee howl galkan ay leeyihiin ciidamada dowladda oo tababaro la sii siiyay.
“Qolaba sida ay u dhaqaaqeyso waa taqaa, waxay wada leeyihiin ciidamo Soomaaliyeed oo tababar la soo siiyay, waxaa la muujinaya mas’uuliyada dowladda ka leedahay howl galka”ayuu yiri Afhayeenka AMISOM.
Afhayeenka ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa isdaba jooga ah oo dalka oo dhan ciidamada qalabka sida oo gacan kaherlaya kuwa AMISOM ay ugu saarayaan maleeshiyaadka Al shabaab iyo kuwa ajaaniibta ah ee iyagu iska leh fikradaha gurracsn ee lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed.
Col. Xumud oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in dagmooyinka dhawaan ay gacanta ku dhigeen ciidamada ay ka jiraan dhibaatooyin xagga nolosha ah oo heysata dadka kudhaqan dagmooyin ay ka mid yihiin dagmada Xudur iyo degaanno kale kuwaasi oo dadka ku dhaqan ay dhibaato ku hayeen maleshiyada Al shabaab.
Dagaalka ka dhanka ah Alshabaab ee bilowday todobaadkii hore ayaa looga qabsaday degmooyinka Xudur, Rabdhuure, Waajid oo ka wada tirsan Bakool iyo Buurdhuubo oo ka tirsan Gedo.
Raysul wasaare Cabdiweli: Alshabaab Wey Sii Liicayaan
Somalia:Afgoye conference approves draft constitution for the Shabelle State of Somalia
Categories Select Category Af Soomaali (10,684) Africa (2,396) Algeria (4) Angola (11) Burkina Faso (1) Burundi (14) Cameroon (32) chad (7) congo (61) Djibouti (29) Egypt (68) Eritrea (48) Ethiopia (175) gabon (2) gambia (6) Ghana (21) guinea (1) Guinea-Bissau (4) Ivory Coast (5) Kenya (272) Liberia (23) Libya (76) mali (8) Mauritanian (1) Morocco (20) Namibia (2) niger (8) Nigeria (55) rwanda (15) Sierra Leone (13) South Africa (91) south sudan (94) sudan (41) Tanzania (16) Tunisia (10) uganda (55) Zambia (16) Zimbabwe (27) Asia (427) Afghanistan (19) Bangladesh (4) china (218) India (24) indonesia (12) Malaysia (1) mynamar (6) north korea (2) pakistan (17) Philippine (3) Singapore (1) Australia (16) Business (291) Business (6) canada (1) Economy (168) Editorial (521) Education (39) Entertainment (67) Europe (628) Austria (9) belgium (1) France (26) German (38) Ireland (3) Italy (17) Rusia (35) spain (37) turkey (43) Ukraine (4) United Kindom (185) Exclusive (7) Fashion (4) Featured (8,331) Food (54) Health (241) Horn of Africa (165) Islam (84) Mareeg العربية (3) Middle East (400) Iran (16) Iraq (37) Israel (58) kuwait (4) qatar (10) Saudi Arabia (58) syria (40) UAE (11) Yeman (29) Notices (6) Opinion (59) Our Contacts (1) politics (54) Science (67) Senegal (2) sheeko-jaceyl iyo love (5) sidebar (3) Somalia (5,460) Archive of mareeg (12) Sports (290) technology (58) travel (8) ubax-sheeko.htm (1) Uncategorized (251) United states of america (254) World news (599) PARAGUAY (1) Venezuela (4)
Latest: UN Security Council adopts resolution to keep piracy off Somalia